Super Bowl paCosmopolitan Hotel Las Vegas
Nyika dzakabatana Nevada Las Vegas
Kana uri kugara kuCosmopolitan yeLas Vegas ye Super Bowl Weekend iwe uchada kuwana nzvimbo yakanaka kuti uone mutambo uye mhemberero dzose dzinotungamira kwazviri uye mushure wemasikati bash. Cosmopolitan ine misha yakawanda uye maresitorendi okutora chigaro uye kutarisa mutambo mukuru asi iwe ungada kubatsirwa kishoma kuwana nzvimbo yakarurama kwauri.
Zvimwe zveSupp Bowl Party nzvimbo muLas Vegas
Chii chiri kuitika kuCosmopolitan yeLas Vegas ye Super Bowl Sunday?
Race & Sports Book kuCosmopolitan ndiyo nzvimbo yekuona Super Bowl kana uri kutarisa kuisa mabheji mashomanana mberi uye panguva yemutambo. Vane state-of-the-art LED mahara masvingo nematarevhizheni asingaverengeki akapoteredza mukamuri. Iwe unogona kusarudza kubva munzvimbo yekuviga kuti ugare pasi uye unakidzwe nemutambo munzvimbo yakaderera-kunetseka kana kuwana nzvimbo yepamutemo yekubheja uko iwe unogona kukanganisa nhamba yako uye ona mamiriro ezvinhu akaparara.Vanewo imba huru yeVIP ine 90- inch screen kuti ikuunise iwe wose bhora rekuita muHD yakakwana.
CliQue Bar & Lounge Chigaro chakachengetwa chichakutengesa mari shoma ye $ 200 muzvokudya nekunwa asi zvinokupa ruzivo rwepamusoro uye nzvimbo yakatarwa yekuona mutambo. Ichi chikwata chinowedzera chichava nemavhevhizheni akawanda kune imwe nzvimbo uye mubhodhoro webasa rinowanikwa. Kuwedzerwa ruzivo pamusoro pekuvhara mabhaji uye mahwendefa ekuchengetedza zvinogona kukumbirwa pa rsvp@cliquelv.com.
Wine bar neresitorendi DOCG Enoteca ichazarura pa2 pm uye ichaparadzira mutambo. Pachipu inotanga pa $ 100 pamunhu uye inosanganisira zvose-iwe-unogona-kudya-buffet uye-iwe-unogona-kunwa mutsvuku newaini yakachena, mombe yepamusha uye kunyanya kubhakwa. Pano panewo zvishoma kune mapaiti yemapupa anowanikwa panzvimbo yepatio.
STK iri kuda kuita sangano rako re Super Bowl riri nani pane iwe wakambove. Bhodhi Raro Guru Kuona chikamu chakasimbiswa nevakawanda zvakanyanya-tsanangudzo 70-inch maTV munzvimbo yese yakaoma, yemazuva ano yeimba yekudyira, pamwe chete neT LED, magadziro emitambo uye zvimwe zvakagadzirirwa zvakagadziriswa. Mutambo unotanga pa2: 00 uye unopedzisa kusvika pakuguma kwemutambo. Pachipu inotanga pa $ 195 pamunhu uye inosanganisira zvose-iwe-unogona-kudya mutengo wemiti inoshandiswa uye zvisingabatsiri zvinyorwa zvinodhaka. Nokuda kwekuchengetedza uye mamwe mashoko, vatenzi vanokurudzirwa kudana 702-698-7990.
Marquee Nightclub & Dayclub ichagamuchira Q Bowl 2017 Kuona Chikamu pa Marquee Dayclub Dome. Masuo anosvinudzwa pa1: 00 masikati uye bhura rakazaruka rinobva kuna 1 kusvika 4 masikati. Kubvumidzwa kwechiitiko chacho nebhuruko rakazaruka chete kana buffet inotanga pa $ 75 nemunhu. Zvose kugamuchirwa ne buffet uye bhura rakazaruka rinotangira $ 140. Vatenzi vanofarira kuchengetedza tafura mu Q-Dome vanokurudzirwa kuti vataure Qbowl@marqueelasvegas.com. Thikiti yekutenga haifaniri kudiwa kune vashanyi vane tafura yekuchengetedza.
MATSVENE - Kufunga nezvekuwanda kwewaini yakanaka paHolsteins iyo inokonzera zvakakwana kuti ndiramire pa Super Bowl Svondo. Chigaro pachigamba chinokutora kusvika kune doro rakakura uye zvokudya. Iwe unotofanira kunge uchingosvika ikoko mangwanani-ngwanani sezvo nzvimbo yacho ine nzvimbo isina zvigaro.
THE HENRY - The Henry ndiyo nzvimbo yekudya yezuva rese iri pedo nekasiyo pasi iyo inofanira kukukwezva iwe neprogram yakakura yekudya inowanikwa kwose kwose muCosmopolitan yeLas Vegas. Mutambo wacho uchave uripo asi hapana chainwa kana zvimwe zvekudya zvinowanikwa. Iwe unogona zvakare kunakidzwa nemhepo kubva kuBond iri pedyo uchifadzwa nechigaro pane Henry. BOND rine zvakawanda zvekuona zvikwangwani uye sarudzo dzakawanda dzekunwa kweSupp Bowl yekuona mafaro.
Wana mamwe mashoko pamusoro peCosmopolitan Hotel muLas Vegas
Mabiko eFestive munzvimbo yose yevashanyi nemapuranga uye lounges akagadzirwa nemukuru wevana mixologist Mariena Mercer achabatanidza:
Kurwiswa Kunokosha - inovandudzwa version yeJack & ginger
Netsoka mbiri muBound - twist on the Margarita, yakagadzirwa neTajin rim nelosiki gumbo
High NRG - shanduro yevodka Redbull mix, yakarongedzwa neinoti ginger
Need Las Vegas updates? Nditevere pa Twitter @ZekeQuezada
Vegas: Mangwanani, Masikati neusiku
Nzira Yokuti Bet On Sports MuLas Vegas
Tora Inja Yako KuLas Vegas KuVdara Hotel & Spa
The Burger Challenge paPUB kuMoro Carlo Las Vegas
Mifananidzo yeBally's Hotel neCasino Las Vegas
LA Kufambisa Mazano Kubva Kudarika
Taura Sezvakaita Kiwi
Free Halloween Zviitiko muLouisville, Kentucky
Nzira Yokusarudza Nayo Caribbean Island yeZororo Rako
Best Eco-Resorts kuMexico
Albuquerque Fun Freebies For Kids
Kubhadhara Imotokari muGreece
Private Albuquerque Middle and High Schools
The 7 Haunted Spots muStanley Hotel
Pamusoro 11 Zvinhu Zvisingabhadhari kana Zvisina Kuitwa Zvokuita muToronto
Kupi Kwokukanganiswa muColorado
Rose Bowl Tiketi